Indlu emangalisayo, ephakathi kwamadlelo kunye nendalo, iikhilomitha ezi-3 ukusuka elwandle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguEmily - BELVILLA
UEmily - BELVILLA unezimvo eziyi-34 zezinye iindawo.
Le ndlu itofotofo eSmoldzinski Las Baltic Coast inamagumbi okulala ama-2 kwaye ikufuphi nechibi. Efanelekileyo kwintsapho, i-cottage ine-sauna ye-infrared kunye ne-quartz radiators, apho unokuvuselela khona emva kosuku oludinayo.I-cottage ibekwe kwindawo ye-buffer ye-Slowinski National Park, ebonwa yi-UNESCO njenge-World Biosphere Reserve. Ukusuka kwiindlela zokuhamba ngebhayisikile ukuya kwiphenyane kunye nokukhwela ihashe, uya konelwa ukuba uzikhethele xa kuziwa kwimisebenzi ejikelezileyo. Ichibi nolwandle nazo zikumgama oziikhilomitha ezi-2 kunye neekhilomitha ezi-3 ngokulandelelanayo. Ungathenga igrosari okanye utyele ngaphandle nje kumgama oyi-0.6 km ukusuka apho kukho igadi enkulu, indawo yesanti yabantwana, indawo yokosa inyama kunye nendawo yokupaka iimoto. Ikhitshi elivulekileyo kunye negumbi lokuhlala le-cum ding elineTV, indawo yomlilo kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini ikhona. Max. Izilwanyana zasekhaya ezi-3 zivumelekile ngentlawulo encinci. Ibhedi kunye nesitulo esiphezulu ziyafumaneka xa uceliwe.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ikhitshi elivulekileyo (ihobhi, iketile yombane, umatshini we-espresso, imicrowave, isitya sokuhlamba izitya, ifriji), Indawo yokuhlala/yokutyela (ibhedi yesofa ephindwe kabini, ibhedi yesofa ephindwe kabini, iTV, itafile yokutyela, indawo yomlilo, ividiyo), igumbi lokuhlambela (ishawari, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, umatshini wokuhlamba, isixhobo sokomisa iinwele))
Kumgangatho woku-1: (igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini(140 x 200 cm)), igumbi lokulala(ibhedi enye (90 x 200 cm), ibhedi yabantu ababini (140 x 200 cm)))
igrill, ibhedi, i-sauna ye-infrared, i-terrace, igadi, ifenitshala yegadi, indawo yokupaka, umgodi wesanti, isitulo esiphezulu, intsimbi, iSeti ye-Swing
Umbuki zindwendwe ngu- Emily - BELVILLA